မားမာသဲရဲ့ ကြက်သားကင်နှင့် ဆန်လုံးညိုထမင်း (Healthy Meal) In:The Fit Slay Queens
The Fit Slay Queens အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mama Thae က share ထားတဲ့ healthy lunch ပုံစံလေးက ထမင်း၊ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစုံပါတဲ့အတွက် ဝိတ်လည်းထိန်းချင်တယ် ထမင်းလည်းမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုသူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အရသာကလည်း asian taste လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ထမင်းတစ်နပ်ဖြစ်အောင် မားမားသဲ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာြ ကည့်ရအောင်နော်။ ကြက်သားကင်နှင့် ဆန်လုံးညိုထမင်း ထမင်းကိုတော့ ဆန်လုံးညိုကိုချက်ထားပါတယ်။ ဆန်လုံးညိုမှာ အမျှှင်ဓါတ် (fibre) ပါဝင်မှုပိုများတဲ့ အပြင် အဆာလည်းပိုခံပါတယ်။ ကြက်သားကင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကြက်ရင်ပုံသား …………… (၁၅၀) ဂရမ် ပံငန်ပြာရည်……………….. လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံခန့် ပန်းရောင်ဆား ……………. လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံခန့် သံလွင်ဆီ…………………..လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ကြက်သားကို ပန််းရောင်ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းနဲ့နယ်ပြီး သံလွင်ဆီပါးပါးလေး ဆမ်းပြီး oven နဲ့ကင်ထားပါတယ်။ ဂျပန်တိုဖူးကြော် ဂျပန်တိုဖူးကိုတော့ သံလွင်ဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ ပန်းရောင်ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးပုံတစ်ပုံခန့် ထည့်ပြီး ကြော်ထားပါတယ်။ ဘိုစားပဲကြော် ဘိုစားပဲသီးလေးတွေကိုတော့ ပဲငံပြာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ ပန်းရောင်ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးပုံတစ်ပုံ၊ ငရုပ်ကောင်းလက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးပုံတစ်ပုံခန့် နဲ့သံလွင်ဆီ စတာတွေသုံးပြီးကြော်ထားပါတယ်။ အချိုပွဲ အတွက်ကိုတော့ သဘာဝ အသီးအနှံတွေပဲ စားဖြစ်ပါတယ်လို့ မားမားသဲက ပြောပါတယ်။ ကဲ… အခုဆို healthy diet ဆိုရင် ထမင်းဖြတ်ပြီး အရွက်ပြုတ်တွေပဲ စားရတော့မှာလားလို့ တွေးနေတဲ့ ပျိုမေတွေ ကိုယ်ဘာကိုယ်အိမ်မှာ ချက်စားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ...
Super MaMa Thae (စူပါမားမားသဲ)ရဲ့ Salmon ငါးကင်နှင့် green salad In:The Fit Slay Queens
ခုချိန်မှာလူတော်တော်များများဟာ ကျန်းမာရေး လိုက်စားလာကြပြီ ဖြစ်ပြီး လူနေမှုပုံစံတွေကိုလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာလှပတဲ့ ခန္̕ဓာကိုယ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ကျစ်လစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ ကျန်းမာသွက်လက်တဲ့ lifestyle တစ်ခုရဲ့များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲက တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ကျစ်လစ်တဲ့ကိုယ်လုံး၊ သင့်တင့်မျှှတတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်စတာတွေဟာ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလို လိုချင်ကြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ များပြားတဲ့အလုပ်တာဝန်၊ မိသားစုတာဝန်၊ ရွေးချယ်စရာ များလွန်းတဲ့အစားအသောက်တွေကြားမှာ ကိုယ်ကာယအလှကို ထိန်းထားရတာလည်း Challenge တစ်မျိုးပါပဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ healthy meal recipe အတွက်ခေါင်းခြောက်နေသူများအတွက် The Fit Slay Queens တစ်ဦးဖြစ်သူ MaMa Thae က ချက်ရလွယ်ကူတဲ့ healthy recipe တစ်ခုကိုအခုလို share ထားပါတယ်။ မားမားသဲဟာ ထမင်းလိုမျိုး ကစီဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အရာတွေအစား အရွက်၊အသားငါး စတာတွေကိုပိုစားဖြစ်ပါတယ်။ Salmon ငါးကင်နှင့် အရွက်စုံ salad အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Salmon ငါး ၂၅၀ ဂရမ်ခန့်သံလွင်ဆီပန်းရောင်ဆားငရုပ်ကောင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Salmon ငါးကို အရင်ဆုံး ပန်းရောင်ဆား၊ ငရုပ်ကောင်းအနည်းငယ်ဖြင့် နယ်ထားရပါမယ်။ ဒယ်အိုးကို ဆီပါးပါးသုတ်ပြီး ငါးထည့်ပြီး ဆီပူလှိမ့်ကြော်ပေးရပါမယိ။ ငါးကိုအကျက်ညီအောင် လှန်ပေးရင်း ခဏဆိုရပါပြီ။ Salad အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့ ဆလပ်ရွက်ငရုပ်ပွချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးRocket အရွက်ထောပတ်သီးSalad dressing ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Salad dressing ကိုတော့ red wine vinegar, ပန်းရောင်ဆား၊ ငရုပ်ကောင်း၊ ပဲငံပြာရည်၊ mustard sauce တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီးအရသာရှိတဲ့ salmon ငါးကင်နဲ့ green salad ကိုရရှိပါပြီ။ ကိုယ်ချက်ပြုတ်နေကျ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေ ရှိရင်လည်း ဒီ post လေးမှာ comment ပေးပြီး share ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ...
မိန်းကလေးတွေ အနှောင့်အယှက် ပေးခံရရင် ဘယ်လို တုံ့ပြန်သင့်လဲ? In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
မိန်းကလေးတိုင်း အနည်းနဲ့အများဆိုသလို စနောက်ခံရတာကစလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေးခံရသည် အထိတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျားမ မရွေး လိင်ပို်င်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခံရနိုင်ပေမယ့် မိန်းကလေးအများစုကတော့ နှုတ်ပိတ်နေဖို့ပဲရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလား??? The Fit Slay Queens အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Foodie Su ကတော့ Sexual harassment ကို ဆန့်ကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူသာကြုံတွေ့ခဲ့ရင် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာ အခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ချင်းမတူတဲ့အတွက် တုန့်ပြန်မှုခြင်းလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ Su ကတော့ အင်မတန်မှစိတ်မြန်တဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုထိရင်မခံတတ်ပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးနို်င်ပါတယ်။ အရင်ကဆို အပြင်မှာ ထိကပါးရိကပါးအပြောခံရတာ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှောင့်ယှက်တာ စသဖြင့်ကြုံရပါတယ်။ အခုခေတ်မှာပိုလာတာက online ပေါ်မှတဆင့် စာပို့တာ၊ ညစ်ညမ်းပုံပို့တာ၊ ကိုယ့်ပုံကိုယူသုံးတာတွေဟာ social media မှာ မိန်းကလေးအများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ Su က မဟုတ်မခံမို့လို့လားမသိဘူး ကိုယ့်ကို အဲဒီလိုရိသဲ့သဲ့လုပ်ခံရရင် တိုက်ရိုက်သွားရှင်းတာများတယ်။ ရိသဲ့သဲ့ကြည့်တယ်နော်…. မပြောသေးဘူး။ ပါးစပ်ကသာ အသားယူတဲ့စကားတစ်ခုခု ပြောကြည့်…. Su ကတော့ ဒဲ့ရှင်းပြီပဲ။ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြန်ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မကြိုက်ကြောင်း၊ ဆက်မလုပ်ဖို့အကြောင်း ပြောတာပါ။ လက်ပါ ပါရင်တော့ ဘာပြန်လုပ်မိမလဲမသိဘူး။ သေချာတာကတော့ ဒီတိုင်းတော့ငြိမ်မခံပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ အော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မိမှာပါ။ ဒါကနှောင့်ယှက်သူက လူနည်းစုဆိုရင်ပြောတာပေ့ါနော်။ ကိုယ်အရေးနိမ့်မယ်ထင်လို့ကတော့ Su တစ်ယောက်ပြေးပြီးသားပဲ (အပြေးကျင့်ထားတာ အလကားမဖြစ်ဘူးလေနော် 😛 ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းမှာလား??? ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ ပြောမှာပါ။ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်အကူအညီယူဖို့ Su ဝန်မလေးပါဘူး။ အဓိက Su ပြောချင်တာကတော့ မိန်းကလေးတွေ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ သူများကူညီပေးတာကနောက်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘက ကိုယ့်ရုပ်လေးကို လူသတိပြုချင်စရာ မွေးပေးထားတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ ကိုယ့်အန္တရာယ် တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်တတ်အောင်တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော် …. ...
“မသိချင်ယောင်မဆောင်ကြပါနဲ့” In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
ဟိုတစ်ရက်က ကိုယ်နဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက် ကော်ဖီအတူ ထိုင်သောက်ဖြစ်တယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေး ချောချောလေး တစ်ယောက်ဖြတ်သွားတယ်။ ကိုယ်တွေ နှစ်ယောက်လုံး ငမ်းကြတာပေါ့။ ဘေးဝိုင်းက ကောင်လေးတစ်သိုက်လည်း ကြည့်ကြတယ်။ သူတို့က ကြည့်ရုံတင်မကပဲ ကောင်မလေးကိုယ်လုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး မကြားတကြား စကြသေးတယ်။ တစ်ယောက်က နမ်းတဲ့ပုံတောင် လုပ်ပြလိုက်သေးတယ်။ ဒါကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်တဲ့ ကိုယ်က ဘေးကသူငယ််ချင်းကို ပြောမိတယ်။ “နင်တို့ယောကျ်ားလေးတွေကလည်း ဆိုးလိုက်တာ” လို့။ သူငယ်ချင်းက လည်းပြန်ပြောတယ် “you, racist” တဲ့၊ ပြီးမှသူကပဲ ”ယောက်ျားလေးပဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့” လို့ပြောတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ပြန်ပြောမိတယ် နင်လည်းယောက်ျားလေးပဲ နင်ရောလုပ်လို့လားပေါ့လေ။ သူခဏတော့တွေဝေသွားတယ်။ ပြီးတော့မှ “ယောကျ်ားလေးသဘာဝ ကြည့်တာလောက်တော့ရှိတာပေါ့၊ ဒီထက်တော့ မပိုဖူးဘူး” လို့ပြန်ဖြေတယ်။ ဒီအကြောင်းပြောရင်းမှ ကိုယ့်ရဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း ဟိုတလောက အလားတူအဖြစ်မျိုးကြုံထားဖူးတာတောင် သွားသတိရမိသေးတယ်။ 🤔🤔🤔 ခုနကအဖြစ်မျိုးဟာ ပုံမှန်ကြည့်ရင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စရုံပါပဲ။ ဒီမှာပြောချင်တာက ရိုးရိုးလှလို့ စတာနောက်တာနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် ပြုမူတာကွာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လိင်ကိစ္စကိုရည်ညွှန်းပြီး ပြောဆိုတာမျိုးဟာ sexual harassment တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မဖွယ်မရာစနောက်တာ၊ စာပို့တာ၊ အမူအရာလုပ်ပြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ စနောက်တဲ့သူတွေက သိသိနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ယူဆပြီးသော်လည်းကောင်း ပြုမူလိုက်တာက လူတစ်ဖက်သားကို နေရခက်စေရုံသာမက ထပ်တလဲလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းပြီး စိတ်ဒဏ်ရာပါရစေနိိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကနေ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက် စနောက်အသားယူတာ၊ စော်ကားတာမျိုးအထိ ဖြစ် လာနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားရင် ကြည့်နေမယ့်သူ ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နှုတ်နဲ့ပြောဆိုရင်၊ အမူအရာလုပ်ပြရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က တုံ့ပြန်မှုနည်းပါတယ်။ ကာယကံရှင်မိန်းကလေး အနေနဲ့လည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့ အခြေအနေမပေးရင် ငြိမ်လိုက်ရတာများပါတယ်။ 😞😞😞 ဒါဆို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ???တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတာထက် ပြုမူတဲ့သူတွေနည်းသွားမှသာ ပိုကောင်းမှာပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေထဲက ဒီလိုပြောတာ၊ပြုမူတာတွေ့ရင် မလုပ်သင့်ကြောင်း၊မကြိုက်ကြောင်းဖော်ပြရပါမယ်။ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းပြောလို့မှ မရပ်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးတားပါ။ လိုအပ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ အသိပေးရပါမယ်။ အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ညီမ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းသာ ဒီလိုအပြောခံရရင်ဆိုပြီး တွေးကြည့်ရင် ဒီကိစ္စဟာ ရိုင်းပြတဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာ လက်ခံလာမှာပါ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ ?? လူတစ်ယောက်ကို မဖွယ်မရာ စနောက်တာ၊ လက်ဆော့တာ အလွန်ဆိုးတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ မိ်န်းကလေးတွေကိုချည်း အနေအထိုင်မတတ်လို့၊ သွားလာနေလို့ဆိုပြီး အပြစ်တင်နေရုံနဲ့ မရပါဘူး။ လူတွေက ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာကို သမရိုးကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို လက်ခံထားရင် ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ ဒီအစား ဝိုင်းဝန်း ရှုံ့ချရမှာပါ။ ကို်ယ်နဲ့သိတဲ့သူ ခံရမှ တစ်ခုခုတုံ့ပြန်တာထက်စာရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲဒီအကျင့်ရှိသူကင်းအောင် လုပ်ထားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ ရှိနေရင်လည်း ရှက်တတ်အောင်ပြောရမယ်လေ။ တကယ်က ယောကျ်ား၊ မိန်းမရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ “ My name is khan” ရုပ်ရှင်ထဲကလို ပြောရရင်လောကမှာ လူကောင်းနဲ့လူဆိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးက မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေဘဲ ပြုသူကိုဟန့်တား ပေးမှထိရောက်မှာပါ။ ကိုယ့် အနေနဲ့တော့ ကြုံရင်ကြုံသလို ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရင် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကအစ မောင်နှမတွေရော ယောကျ်ားလေးသူငယ်ချင်းတွေရော အဲဒီလိုဖြစ်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်တဲ့အတွက် မကြာခဏပြောဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်တာမြင်ရင်တားဖို့အထိပေါ့။ ဒါမျိုးတွေဟာ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက် အမြင်မတော်တာတွေ့ရင် ငြိမ်မနေဘဲ များများပြောပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။🤗🤗🤗 ...
Super MaMa Thae ရဲ့ သမီးလေးအတွက် Lunch Box Recipe In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
Super MaMa Thae က ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်တွေ ရှုပ်နေပါစေ သူ့သမီးလေးအတွက် နေ့လည်စာ(lunch box) ကိုတော့ အမြဲတမ်း ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်ရော မြင်လိုက်တာနဲ့ စားချင်စိတ်လေး ဖြစ်ပေါ်နေအောင်ပါ သေချာလေး အချိန်ပေးပြီး ပြင်ဆင်ပေးထားတာပါ။ သူပြင်ပေးထားတဲ့ lunch box လေးကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် သူ့သမီးလေးအပေါ် ဘယ်လောက်ထိ ဂရုတစိုက်ရှိလဲဆိုတာကိုပါ သိနိုင်ပါတယ်။ Super MaMa Thae က သူ့ရဲ့သမီးလေးအတွက် ကျောင်းမှာစားဖို့ နေ့လည်စာ(lunch box) recipe လေးတွေကတော့… ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့……ထမင်းဆီဆမ်း၊ cherry tomato ကြက်ဥကြော်၊ မုန်လာဥနီကြော်နဲ့ cheese sausage လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိုတည်းဖို့ကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ blueberry cake လေးနဲ့ ကွတ်ကီးလေးပါ။ Cherry tomato ကြက်ဥကြော်ကတော့ ကြက်ဥကြော်လေးကို cherry tomato, soy sauce, olive oil နဲ့ ဆားအနည်းငယ် ရေညှိအနည်းငယ်လောက်ထည့်ပြီး ကြော်ထားတာပါ။ မုန်လာဥနီကြော်ကိုတော့ ဆီနဲ့ soy sauce ကိုပဲသုံးပြီး ကြော်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ cheese sausage ကတော့ ဆီနဲ့ ရိုးရိုးလေးပဲ ကြော်ထားတာပါ။ Blueberry cake လေးကိုတော့ cake၊ ဂျုံ၊ ကြက်ဥ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ ဆီ၊ ဆားနဲ့ blueberry အနှစ်ကို တစ်ခါတည်းထည့်မွှေပြီးတော့ ဖုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြားထဲက cream ကတော့ cream cheese နဲ့ blueberry အနှစ် ရောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ထမင်းဆီဆမ်း၊ အမဲသားကြော်၊ ကိုက်လန်ကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်ချဉ်ရည်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိုတည်းဖို့မုန့်ကတော့ သင်္ဘောသီး၊ အာလူးကြော်နဲ့ ခေါက်မုန့်လေးပါ။ အမဲသားကြော်ကတော့ အမဲသားကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ soy sauce၊ mozzarella cheese နဲ့ သမအောင်နှယ်ပြီး olive oil နဲ့ ကြော်ထားတာပါ။ လှပပြီး စားရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ ခရမ်းချဉ်သီးကွင်းလေးတွေကပ်ပြီး ခပ်ပြားပြားပုံစံလေးတွေ ကြော်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုက်လန်ရွက်ကိုတော့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရုဆီ၊ soy sauce နဲ့ အချိုလေးကြော်ထားတာပါ။ ပန်းပွင့်ချဉ်ရည်ဟင်းကိုတော့ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်ကို ငါး၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို အသုံးပြုပြီး ချဉ်ရည်ဟင်းလေးချက်ပေးထားပါတယ်။ အသီးအရွက်ကိုတော့ သမီးလေးဝမ်းမှန်အောင်အတွက် နေ့တိုင်းအမြဲလိုလိုထည့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ကဲ…. ကြည့်လိုက်ပါဦး။ သမီးလေးကိုချစ်တတ်လိုက်ပုံများ ။ Super MaMa Thae ရဲ့ lunch box recipe လေးတွေ နောက်အပတ်တွေမှာလည်း ဆက်တင်ပေးသွားမှာမို့ စောင့်ကြည့်ပေးနေနော် ...
မေမေတွေအားလုံး ကိုယ့်ကျန်းမာရေး နဲ့ အလှအပအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ဂရုစိုက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ Super MaMa Thae In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
The Fit Slay Queens တွေထဲက member အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Super MaMa Thae ရဲ့ Fitness Journey ကို ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ??? မိခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ ဇနီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး မိသားစုတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုး ဘယ်လိုရရှိလာတာလဲဆိုတာကိုတော့ Super Mama Thae က ဒီလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်… အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မကတော့ MaMa Thae (မားမား သဲ) ပါ။ ကျွန်မက The Fit Slay Queens ရဲ့ member အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ Fitness Journey လေးဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ ကလေးမွေးပြီးတော့ အရမ်းဝလာပါတယ်။ ပေါင်ချိန်တွေလည်း အရမ်းတက်လာပြီး ထိုင်ရ၊ ထရတာတောင် အဆင်မပြေဘူးဖြစ်လာပါတယ်။ ကလေးမမွေးခင်တုန်းက ပိန်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ ဝလာတာမကြိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု ပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်မရဲ့ ညီမလေးဖြစ်တဲ့ Fit By PannEi ကလည်း gym ဆော့နေတာဆိုတော့ သူနဲ့လိုက်ဆော့မယ်ဆိုပြီး စဆော့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Pann Ei ကလည်း သေချာ train ပေးတာကြောင့် အခုလို ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပါ။ ကျွန်မ အားတဲ့အချိန်တွေကိုတော့ gym မှာပဲ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မိခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို၊ ဇနီးသည်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုကိုအချိန်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စောစောထ ခင်ပွန်းအတွက်၊ ကလေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ပေး၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ပြီး နေ့လည်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်း အားတဲ့အချိန်လေးကို gym ပြေးဆော့ဖြစ်တာပါ။ Gym ဆော့ဖြစ်လာတဲ့အခါ အကျင့်ရလာပြီး တစ်ရက်လောက် မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် နေမကောင်းချင်သလိုလို၊ မအီမသာတောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ နည်းနည်းဆော့လိုက်တော့မှ ချွေးထွက်သွားပြီး လူကလန်းဆန်းလာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီခံစားချက်လေးကို ကြိုက်တာကြောင့် gym ပုံမှန် ဆော့ဖြစ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ gym ဆော့တာ အခုဆိုရင် (၃) နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ Fitness ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တင်မကပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိမှု နဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိမှုတွေကိုပါ ရရှိစေပါတယ်။ ကျွန်မတို့မိခင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ဆင်ခြေတွေပေးလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အိမ်မှုကိစ္စတွေ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စတွေကြောင့် အချိန်မရှိဘူးဆိုတာမျိုး၊ မအားဘူးဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ကျန်းမာနေဖို့ လှပနေဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အားသလို အချိန်ပေးပြီး ဆော့ဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်မအရင်ကဆိုရင် ဖျားတာ၊ နာတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေ ခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေစလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီလိုမျိုး အသေးအမွှား နေမကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး၊ နေလို့ပိုကောင်းလာပါတယ် (gym မဆော့ဖြစ်တော့မှသာ နေမထိ၊ ထိုင်မသာဖြစ်တာပါ)။ ကျွန်မလည်း တစ်ခါတလေ ၁ လလောက်အထိ နားလိုက်တဲ့အခါတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝါသနာပါသလို fit ဖြစ်နေတာကိုလည်း ကြိုက်တာကြောင့် ဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိနေပြီးတော့ အမြဲပြန်ဆော့ဖြစ်တာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်အထိ အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ကြိုးစားပြီး work out တွေ လုပ်ရင်း fit ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာမျှတတဲ့ လူနေမှုဘဝတစ်ခုကို နေထိုင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ မေမေတွေ အားလုံးလည်း ကိုယ့်ကျန်းမာရေး နဲ့ အလှအပအတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ဂရုစိုက်နိုင်ကြပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ ...
Super MaMa Thae (စူပါမာမားသဲ) In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
The Fit Slay Queens အဖွဲ့ရဲ့ member အသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမချောချောလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူမကတော့ မသဲဖြူဖြူလတ် (ခေါ်) သဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့နာမည်ကတော့ Super Mama Thae ပါ။ ဘာလို့ ဒီလို ခေါ်လဲဆိုတာ သိချင်သွားပြီဟုတ်? သူမကို “မာမား သဲ” (MaMa Thae) လို့ ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မေမေတစ်ယောက်မို့လို့ပါ။ “Super” လို့ ခေါ်ရတာကတော့ မသဲက ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ မေမေတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို နိုင်နင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်၊ သမီးလေးအတွက် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရုံသာမက ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့အစားအစာတွေ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Healthy Meal Plan လုပ်ငန်းကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ထက်မြက်ကြံ့ခိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမ ဒီလို အလုပ်တွေ မအားမလပ်တဲ့ကြားက ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို သေချာပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်တဲ့အပြင် fitness ကိုလည်း မှန်မှန်လိုက်စားနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာပြီးအချိုးကျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (သူမရဲ့ ကျော နဲ့ လက်မောင်းက muscles တွေ နဲ့ သူမရဲ့ ဗိုက်က six packs တွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် သူမရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုက တကယ်ကို အားကျစရာပါ။) နောက်အပတ်တွေမှာ သူမဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားဖြစ်ခဲ့ပုံ၊ အခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျစ်လျစ်သန်မာကျန်းမာလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရအောင် အချိန်မအားတဲ့ကြားက ဘယ်လိုမျိုး ကြိုးစားလေ့ကျင့့်ကစားခဲ့ပုံ၊ သူမရဲ့ Healthy Meal Plan တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်၊ မိခင်တစ်ယောက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းပြီး မျှတတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်ခုရအောင် အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲ ဆိုတာတွေကို ဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo Venue : Reborn Gym ...